RAKOTOARIVELO MAMY : AZA FERANA AMIN’NY NI..NI NY VAHOAKA MALAGASY – MyDago.com aime Madagascar
Ela ela tsy tazanareo teto ny tenako hoy ny filohan’ny kongresin’ny tetezamita Rakotoarivelo Mamy androany teny amin’ny Magro Behoririka fa namita iraka tany am-pitandranomasina nanotrona ny filoha Ravalomanana Marc. Indroa miantoana hoy izy izany dia tany Seychelle fa tsy afaka kosa tany Maputo. Ny tany Seychelle hoy Mamy dia zavatra telo no nifanarahana tany. Ny filoha Zuma mihitsy no nametraka fanontaniana tamin’izany. Ny voalohany dia ny hoe ekentsika ve io datim-pifidianana 08 May sy 03 jolay fihodiananana faharoa. Niteny ny filoha Ravalomanana hoy izy hoe ekena io. Ny faharoa kosa dia hoe hilatsaka ve ianao ho filoham-pirenena. tsy nisy fitenenana hoe Ni Ni
izany tany. Hilatsaka aho hoy ny filoha. Ny fahatelo dia hoe ekenareo ve ny fampiharana ny tondrozotra amin’ny andininy faha 20 sy faha 45.Ekenay hoy ny filoha. Ireo hoy Mamy no nangatahana famaliana tany. Hinoako fa ireo ihany no niadiana hevitra tany Maputo. Mazava amintsika hoy izy fa mety tsy voalaza tao amin’ny fanambaran’ny Sadc fa misy fanambarana miafina dia ny hoe tsy maintsy mody Ravalomanana ary afaka milatsaka izay ary ekena ny datim-pifidianana. Ny fanamarihana ataontsika hoy Mamy dia ny miteny hoe Ravalomanana tsy afaka milatsaka fa voasazy fa Rajoelina afaka milatsaka. Sao dia ny mifanohitra amin’izay no fipetrany. Rajoelina hoy izy nanongam-panjakana ka voasazy amin’ny andininy faha 16 amin’ny cotonou sy ny satan’ny demokrasia sy ny fanajana ny zon’olombelona. Hoy izahay hoy uty mpanao politika ity, avaelao hilatsaka izay hilatsaka fa aza ferana amin’ny Ni Ni ny vahoaka. Mazava ny resaka fa tsy misy Ni Ni izany ny Sadc. Nanafatra ny vahoaka ihany koa ny tenany. Efa ho avy tsy ho ela ny filoha Ravalomanana, ka manaova fanazarantena . Ataontsika mangorovitsika ny eny Ivato. Herinandro vitsivitsy hoy izydia higadona eto an-tanindrazana ny filoha Ravalomanana.
Mamy Rakotoarivelo : « tsy izaho no zava-dehibe fa ny filoha Ravalomanana »
Video – Niahaona i Mamy Rakotoarivelo SG TIM sy ny Escopol 28/12/10
Marc Ravalomanana sy Mamy Rakotoarivelo, 30/12/2010
Auteur Solo Razafy*Publié le 1 septembre 2012 2 septembre 2012 Catégories Politique
4 pensées sur “RAKOTOARIVELO MAMY : AZA FERANA AMIN’NY NI..NI NY VAHOAKA MALAGASY”
Ny marina dit :
1 septembre 2012 à 20 h 03 min
tokony mba hamafisina matetika amin’ny olona io voalazan’i Mamy Rakotoarivelo etsy ambony io fa tena tsy fantatra intsony ny tena marina dia fanina ny vahoaka. Kay ve izany tsy nisy resaka an’izany « NI, ni » izany akory. Ampiasao ny TV plus, ny Midi mad, ny gazety rehetra, ny radio sy ny sisa hilaza ny « tena marina » fa sady efa mahantra ny vahoaka malagasy no tsy mahare ny tena « vaovao marina ». Tokony tsy ho ela intsony ny fanatanterahana an’izany fa sao tara foana eo indray isika. Efa betsaka izay 4 taona feno lainga izay. Ilaina averimberina matetika mihitsy io, mba ho masaka tsara alohan’ny hisian’ny fifidianana. Misaotra tompoka
Isika mifanakalo vaovao eto no ilaina indrindra hanaparitaka ny marina eny Magro, any ampianarana sy isan-tokantrano ary hitarika ny mpitondra fivavahna hanome fijery afa ny fiainana ka hanaovany adidy @ olona ankoatry ny vavaka.
Renindozatra France anie tsy hipetra-potsiny mihintsy e:
– Efa mety miala any, izay ho hasolondry zareo an’i Domelina sy ny forongony, dia nampifalifaliana tany @ ingahy P.de Villiers , dia asaina maka » devoirs de vacances » efa nomanin’i L.Fabius.
– Ny Cenit efa nahavita ny fandaminana fombafomba ny fifidianana notereny COI ataony.
– Ny ttsy na biletà moa efa vita rafitra efa ela fa fanatontana azy no ela dia tonga dia lany à 90% ny mpiasa vao2-ny frantsay, toy ny efa niseho rehetra any Afrika « francophones ».
– Ny loza dia ho ampiaran-dry zareo ny korontana, afahandry zareo manilika ny hadisona @ filohantsika, dia alefa ho tsaraina toa GBAGBO sanatria.Ilay fikambanana jiolahy nametraka fitoriana ny filoha tany Afrika Atsimo anie ka efa dingana araky ny paika ratsy novolavolainy frantsay e!
– Misy atao hoe « matrice » efa voadiniky ny frantsay fa ny mampikatso ny asa ratsin-dry zareo dia ny fitsofohany sinoa sy rosiana. « Facteurs » iray mandrebireby andry zareo izany ankoatry ny bekintana. Ilay hiraka avy @ Poutine hono toa isany tia hampiatra io Ni…Ni io araky ny navoakany gazety iray.
– Ry zareo « grandes puissances » mifanditra samy ry zareo momba ny hangalarana mora ny harem-pirenena malagasy ary ny vahoaka rebirebena,tsy avela hanana fotoana hisaina mazava ny miseho ka taritina hifankahala sy hifandrafy rehefa avy mivavaka.
– Efa 2012 izao anie dia mbola misy ihany miresaka « fifidianana mangarangarana »!!!
« Naîveté » sa fihafenana ambadiky ny « eksiokiozy » afa indray hono!
Inona ihany ary no atao ?
Sa hiandry ny 21/12/2012 satria io koa mbola « eksiokiozy » azo atao!!!!
3 septembre 2012 à 4 h 48 min
Misaotra amin’ity ê: « ka manaova fanazarantena »
Ny jamba hahiratra
Ny moana hiloa-bava
Ny mareninana handre
dia mitsangàna ry tanora
Ny solontenan’ny COI, ilay seychellois –
tsy navelan’i Annick fa nahodiny amin’ny alalan’ny V na dia efa taty dago aza,
hirediredy nilaza NiNi teo
3 septembre 2012 à 18 h 44 min
Ka izay tian’i renikely no hatao koa inona no mahagaga @’izany fa izay no
didiny navoakany dia mamerina ny boloky mpitaty rakena rehetra hoe » :…ni….ni »
ni…ni ny anadahin-dreniny!tsy fantany akory ny zavatra teneniny.
Précédent Article précédent : Eliane NAIKA 2012-08-31 19:51:00
Suivant Article suivant : Fitsaram-bahoaka : mariky ny tany tsy tan-dàlana